Home YURUB IYO YURUB Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold. Dhibcaha waraaqaha bogga iyo Twitter-ka
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee Xiddig Kubadda Cagta ah oo lagu naaneeso "Brunelleschi". Sheekadeena Carruurnimada Federico Bernardeschi oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Noloshii iyo Kacitaanka Federico Bernardeschi. Astaanta Sawirka: ThePlayersTribune, Wallpapercave iyo Gianlucadimarzio
Falanqaynta buuxda waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskiisa, waxbarashadiisa / xirfadiisa shaqo, noloshiisii ​​hore, wadooyinka caannimada, sara u qaadida sheekada, nolosha xiriirka, nolosha shaqsiyadeed, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee yaqaana ee ku saabsan isaga.
Haa, qof walba waa ogyahay waa mid ka mid ah rajooyinka ugu xiisaha iyo xariifnimada leh ee reer Talyaani ee caan ku ah jagada ugu dhaw ee dareenkiisa iyo isha uu higsanayo. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa ka fiirsanaya taariikh nololeedka Federico Bernardeschi taas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Federico Bernardeschi wuxuu ku dhashay maalinta 16th ee bisha Febraayo 1994 hooyadiis oo ah Kalkaaliye caafimaad iyo aabe, Alberto Bernardeschi (shaqaale warshadeed marsada) oo ku yaal Carrara, gobolka Tuscany, Talyaaniga. Hoos waxaa ku yaal sawir qurux badan oo badaha oo yar oo Federico Bernardeschi markii uu ahaa cunug.
Sawir naadir ah oo Federico Bernardeschi markii uu ahaa cunug. Astaanta Sawirka: ThePlayersTribune
Federico Bernardeschi wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa Carrara, magaalo ku taal badhtamaha Talyaaniga taas oo caan ku ah naaneysta caan ah oo loo yaqaan; 'Magaalada marmar'. Haddaba su’aasha:… Maxaa Magaalada Magaalada Marble... Sababtuna waxay tahay Carrara waxay caan ku tahay soosaarkeeda quruxda cad ee Carrara. Ma ogeyd?… Magaalada Maarso sida hoos lagu xusay sidoo kale waa meesha ay ku dhasheen iyo guriga Goolhayaha Legendary Legendary Gianluigi Buffon.
Sawir qurux badan oo Carrara (Magaalada Maarso) halka Federico Bernardeschi uu leeyahay Asalkiisa Qoyska. Magaalada Maarso. Astaanta Sawirka: carraramarbletour iyo Pinterest iyo TuscanyPrivateTour.
Mid ka mid ah waalidiinta Federico Bernardeschi- aabihiis wuxuu u shaqeeyey shirkad dhir marmar ah magaalada dhexdeeda maalmihii caruurnimadiisii. Sida carruurta badan ee waalidiinta leh (waalidiinta) mashquul ku ah, Federico wuxuu arki karaa aabihiis kaliya fiidkii sida Alberto shaqeyn lahaa saacado dheer, oo ka kicinaya sariirta markay tahay 5 am, oo ka tegaya guriga kahor 6 am oo ku soo laabanaya guriga 6 pm Sidaa darteed, Federico wuxuu ku qaatay noloshiisa carruurnimada badan noloshiisa hooyadiis iyo walaasheeda yar, Gaia.
La kulanka aayaha Kubadda Cagta: Markii Federico Bernardeschi saddex sano jiray, aabihiis ayaa u geeyay bakhaarkan weyn ee lagu ciyaaro ee ku yaal bartamaha magaalada Carrara. Markii uu yaraa Federico wuxuu qaaday laba tilaabo gudaha dukaanka, waxa ugu horeeya ee uu arkay wuxuu ahaa kubad. Markiiba, ayuu si toos ah ugu orday xaggiisa, soo qabtay oo u sheegay aabihiis inay tahay waqtigii ay ka bixi lahaayeen. Alberto wuxuu doonayey Federico inuu fiiriyo waxyaabaha kale ee lagu ciyaaro, laakiin wuu diiday inuu ku adkaysto inuu doonayo kubada cagta oo kaliya.
“Sababta oo ah waxaan arkay waxaan doonayo” kubada cagta ”, wax uma oggolin inay wax ila noqdaan. Taasi waa dabeecaddayda Ama waa inaan dhaho, taasi waa dabeecadda dadka asal ahaan ka soo jeeda qoyskayga. Dadka ka socda Carrara waxay u adag yihiin sidii marmar - Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, weydii Gigi Buffon. "
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Bilowgii noloshiisa, Federico wuxuu sameeyay ikhtiyaarka ugu dambeeya ee doonaya inuu noqdo xirfadle kubbadeed. Markii hore, waxaa jiray caqabado ku saabsan rabitaankiisii ​​ahaa inuu helo waxbarashada ugu fiican kubada cagta. Aagga Federico ku noolaa, Magaalada Marble, ma jirin koox dhalinyaro oo wanaagsan oo ku filan. Waqtigaas kadib, kooxda ugu fiican xaafadiisa, ASD Sporting Atletico Carrara ma uusan soo bandhigin wixii ay waalidkiis rabeen ka dib markii ay wakhti yar la qaateen.
Si ay ugu helaan waxa ugu wanaagsan wiilkooda, waaliddiinta Federico Bernardeschi waxay ku qasbanaadeen inay wax doortaan. Hooyadiis iyo aabihiis labaduba waxay ku heshiiyeen in wiilkoodu ka tago dugsiga goor hore 3: 15 pm (Daqiiqadaha 45 kahor fasalada iskuulku caadi ahaan way dhamaadeen) si aan ugubadbad ugu ciyaaro kubad leh akadeemiyad cusub.
Federico Bernardeschi Life Career Life oo uu la joogo kooxda Atletico Carrara. Dhibcaha: IG
Markii uu jiray siddeed jir, Federico Bernardeschi wuxuu bilaabay inuu waxbarashadiisa kubbadda cagta la qaato Polisportiva Ponzano, xarun tababar kubbadeed oo xiriir la leh Empoli, oo qiyaastii 70 mayl u jirta guriga qoyskiisa. Waqtigaas ka dib, hooyadiis waxay iskuulka ka kaxeyn doontaa maalin kasta kahor waqtiga xiritaanka, si ay u siiso qadada (badanaa baastada) ka dibna u kaxee dhinaca Empoli isaga oo leh cajiinka qoyska Opel Vectra. Ka hadlida khibrada maalinlaha ah sida ThePlayersTribune dhigayaa, Federico Bernardeschi mar yiri;
Sababta oo ah waan ogahay inaan caadiyan waxyar ka daaho. Waa inaan ku xidhaa kabihiisa kabaha gaariga. Hooyaday dhif ayey joogsan laheyd. Markaan gaadho, waxaan u soo bixi doonaa garoonka si aan u gaadho fadhigayga tababarka. Laba saacadood ka dib, tababarka kubbadda cagta wuu joogsan doonaa, waxaanna ku laaban lahayn sidii aan u nimid. ”
Xitaa markii uu guriga ka soo noqday iskuul mashquul ah iyo maalin ciyaaraha, waalidiinta Federico Bernardeschi waalidkood iyo xubnaha kale ee qoyska ayaa ogaa inuu yahay loogu talo galay waxyaabo waaweyn madaama ay wali daawanayeen isaga oo dib u eegis ku sameynaya xirfadihii uu bartay.
Ma ogeyd?… Federico sariirta ma joogi doono ilaa 10: 30 pm ama 11 pm fiid kasta, ka bacdi goor hore oo aroortii hore ah si aad u sameyso mar labaad. Go'aankaas oo kale iyo shaqo adag ayaa markii dambe bixisay saamiyadeeda. Markii Federico Bernardeschi loogu yeedhay inuu ka qayb galo tijaabooyinka Florentina, kibirka dhammaan xubnaha qoyska (kaasoo isaga la joogay meel kasta oo safarkayga ah) lahayn xuduudo.
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Maxkamad guuleysatay ayaa aragtay Federico Bernerdeschi sanadka 2003 (da'da 9) ku biirista garabka akadeemiga ee Fiorentina. Florence, magaalada ay ku taallo naadiga ay ku yaalliin ayaa waxoogaa bari ka xigay Empoli, isla wadada weyn ee loo yaqaan Federico iyo hooyadiis waxay wadeen baabuur.
Bilowgii shaqadiisa, aabihiis Federico Bernerdeschi wuxuu had iyo jeer igu riixi lahaa inaan si ka sii wanaagsan sameeyo, isagoo xanaaq ka muujinaya fursad kasta oo uu seegay. Si loo maareeyo cadaadiska uu aabihiis abuuray, Federico ayaa mar yiri;
“Markaad tahay cunug, mararka qaarkood waxaad dareemeysaa arin aad u badan gaar ahaan markii ay ka timid aabe kaa xanaajinaya daqiiqad kasta oo aadan si fiican u gelin.
Laakiin markii aan sii yaraa, waxaan bilaabay inaan fahmo aabahay inbadan ayuu iga doondoonay sababta oo ah isagu rumaystay aniga igu jira ”
Cadaadiska uu aabihiis keenay ayaa wuxuu horseeday Federico in uu wacdaro weyn ka sameeyo kooxda markii uu ku soo dhex koray da 'yarta dhalinyarada, isagoo ka carooday koox kasta oo ka soo horjeedda.
Federico Bernardeschi Sanadihii Hore ee Fiorentina. Sawirka Sawirka: IG
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Markii uu jiray 16, Federico Bernardeschi oo ciyaarayay kubad ugu fiican noloshiisa ayaa aad ugu dhowaatay sameynta kooxda waa weyn ee Fiorentina. Sida uu mooday in waxkasta oo noloshiisa ah ay u socdaan si hagaagsan, nasiibdarro ayaa dhacday.
Warka Sadarka: Waxay dhammaan bilaabeen maalintii liidata ee Federico oo u socday baaritaan caafimaad oo joogto ah. Kooxda caafimaadka ee Florentina waxay heleen wax, oo ay ku sheegeen inuu khalad ku socdo jirkiisa taas oo ku kaliftay inay sameeyaan baaritaano dheeri ah iyo Xrays. Dhowr maalmood ka dib, dhakhtarku wuxuu warbixin kooban siiyay waalidiinta Federico Bernardeschi waalidkood wixii ay ku arkeen jirka wiilkooda.
Wiilkaaga wuxuu leeyahay qalbi balaaran. Ma hubno sida ay u xun yihiin. Sikastaba, suurta gal ma ahan inuu sii wadan doono xirfadiisa kubada cagta. ”
Dhakhtarku wuxuu u sheegay waalidkiis. Sidii la filaayay, Federico wuu rumaysan kari waayey, dhab ahaantii, wuu diiday inuu maqlo, isagoo qaylinaya .. ”Maya… taasi waa wax aan macquul aheyn ”. Waxay ku qaadatay dadaal badan hooyada Federico hooyadeed inay xasiliso kubadsameeyaha xasilloon.
Federico Bernardeschi waxaa laga helay cudurka Cardiomegaly oo macnaheedu yahay Wadne Weyn. Sumcada Sawirka: WebMD
Kadib markay si dhaw ula socdaan xaaladda, dhakhaatiirtu waxay ugu dambeyntii go’aamiyeen in Federico uusan awoodi doonin inuu ciyaaro kubbada cagta muddo lix bilood ah oo kaliya, war kooban oo ka dhigaya qoyska Bernardeschi inay dareemaan deganaansho aad u badan. Intii lagu gudajiray waqtiga sugitaanka, wuxuu isku dayay inuu ku mashquulo waxa uu ugu yeeray lix bilood ee ugu adag noloshiisa. Kadib baaritaanno aan tiro lahayn, booqashooyinka takhasuska ah iyo kulamada, Federico ayaa ugu dambeyntii loo siidaayay si uu dib ugu bilaabo kubadiisa.
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Kusoo sharax sheekada
Markay ahayd 20 Juun 2014, Federico wuxuu soo galay jidkiisii ​​ugu horreeyay ee hoos imaanayay amarrada Vincenzo Montella. In ka yar saddex sano ka dib markii uu kulankiisii ​​ugu horreeyay ee mihnadeed, (da 'ahaan ku jiray 22), Federico da' yar ayaa loo gacan geliyey kabtanka kabtanka isaga oo uga mahadcelinaya qaan gaadhnimada, shaqo adag, dareen fiican oo mawqif leh iyo isha higsasho. Ahaanshaha hogaamiyaha da'da da '22 waxaa loo tixgeliyey inuu aad u yar yahay marka loo eego xaaladda kubbadda cagta Talyaaniga halkaas oo khibradda si weyn loola dhaqmo.
Xilliga soo socda (2015 – 16), Bernardeschi ahaa ayaa la siiyay lambarka 10 shaati hore u xirtay sida kan oo kale Roberto Baggio. Isla mar ahaantaana, wuxuu sidoo kale helay naaneyskiisa “Brunelleschi”, kadib naqshadeeye caan ah. Thanks to farsamadiisa iyo quruxdiisa garoonka.
Bernardeschi wuxuu qabtay 10 maaliyad - Lambarada kooxeedyada sumcadda leh ee uu horey ugu guuleystay Roberto Baggio. Astaanta Muuqaalka: blackwhitereadallover
Maaddaama uu yahay hoggaamiye horumarsan garoonka, Federico Bernardeschi waxaa la guddoonsiiyay Abaalmarinta Hoggaanka Kubadda Cagta ee AIAC Under-21 Award. Guushaasi halkaas kuma joogsan oo kaliya, wuxuu sidoo kale noqday qofka kaliya ee Talyaani ah ee safka kaga jira Uefa Champions League 21 Xulka Horyaalka Tartanka. Arintan ayaa indhaha ka qabatay qaar ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub.
Noqo mid ka mid guryaha ugu wanaagsan ee kubada cagta Talyaaniga oo soo jiidatay kooxda ay xafiiltamaan ee Fiorentina, Juventus oo ka dhigtay ciyaaryahanka ugu sareeya tan iyo markii Baggio (1990) uu uga tagay Florence oo uu ku soo biiro. Sida waqtiga qoraalka, Federico Bernardeschi wuxuu ka caawiyay kooxdiisu inay ku guuleysato wax walba oo kubbadda cagta Talyaaniga ah; Horyaalka Serie A, Coppa Italia iyo Supercoppa Italiana oo caan ah.
Kaca iyo kacitaanka Federico Bernardeschi. Astaanta Sawirka: Pinterest, FootyAnalyst,
Beri baa ah, cunugga diiday inuu doorto waxyaabaha kale ee ciyaarta ee aan ahayn kubbadda cagta ayaa hadda leh adkaystay sarakicis meteoric ilaa heer sare indhahayaga hortooda. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Xiriirka
Dhab ahaan nin kasta oo guuleysta, waxaa ku sugan naag naxdin leh oo indhaha duubtay. Xaaladda Azzurri ee caalamiga ah, runtii waxaa jiray WAG qurux badan oo markii dambe noqotay gabar saaxiibo ah. Iyadu maahan qof kale oo qurux badan oo ah Veronica Ciardi.
La kulan Federico Bernardeschi Gabadha saaxiibka- Veronica Ciardi. Astaanta Sawirka: DropNews
Barashada Veronica Ciardi: Wuxuu ku dhashay waalidiinta talyaaniga, Veronica waxay noqotay mid ka mid ah tartamayaasha ugu caansan ee nooca 2009 Talyaani ah ee Big Brother. Intii ay ku jirtay waqtigeedii bandhiga runta, waxay xiriir la yeelatay qof kale oo la tartame oo la odhan jiray Sarah Nile. Xiriirku wuxuu ahaa mid sababay fadeexad telefishan Talyaani ah maxaa yeelay waa kii ugu horreeyay gabar saaxiibtiis ah sheeko jaceyl oo lagu sii daayo show dhab ah oo Talyaani ah.
Federico Bernardeschi Gabar saaxiibtiis ah- Veronica Ciardi iyo gacaliyaheeda Sarah Nile. Astaanta Sawirka: pinkmonster
Xiriirka Veronica iyo Sarah wuxuu dhammaaday Sebtembar 2010 ka dib cadaadis badan oo ka yimid saxaafadda Talyaaniga. Federico Bernardeschi oo sagaal sano ka yar Veronica ayaa biloowday shukaansiga dhowr sano kadib markii ay jaceyl la kulmeen markii ugu horeysay ee ay ku kulmaan magaalada Formentera.
Ka dib laba sano oo yaab leh oo shukaansiga ka dib, Bernardeschi oo aan eegin cilladdeeda weyn ee 'Big Brother's' wuxuu goostay inuu saaxiibkiis u soo jeediyo waxa saxaafadda Talyaanigu ka dhacey, kuna dhacay meel jacayl ah.
Bernardeschi wuxuu u soo jeediyey saaxiibtiisa ka dib laba sano oo shukaansiga ah. Astaanta Sawirka: Forzaitalianfootball
Nasiib darrose, waxyaabihii sifiican ugama aysan fileyn lammaanaha sida ay ku dhawaaqeen a kala qaybsanaan amni ah horraantii 2017. Isaga oo ka hadlaya khibradiisa xiriirka uu la leeyahay saaxiibtiisa, Bernardeschi wuxuu sheegay inay taasi ka dhigtay isaga inuu qof ahaan u koray. Ka dib muddo shan bilood ah oo ay si nasiib darro ah u kala go'een, saaxiibtiisi hore ee Federico ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday kala tagiddeeda iyada oo loo marayo Instagram.
Dhowr sano ka dib markii ay kala tageen, dhibaatadii hore ee jaceylkii hore ayaa soo dhammaaday iyagoo ku soo noqday shukaansiga midba midka kale, oo xiriirkooda qarsoodiga ka dhigaya muddo bilo ah. 28th of August 2019, Veronica iyo Federico waxay noqdeen waaliddiin.
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Naftaada Shaqsiga
In la barto nolosha Federico Bernardeschi noloshiisa shaqsiyadeed ayaa lahaan doonta kaa caawin doona inaad hesho sawir wanaagsan oo ku saabsan sida uu noloshiisa ugu nool yahay garoonka dhexdiisa.
Sababtoo ah waxaa jiray marmar badan oo midabkiisu caddaan yahay oo hareerahiisa ah markii uu weynaanayay, Federico wuxuu sheegay in astaamahan marmar ay ku dhici doonaan riyooyinkiisa isaga oo madaxiisa sawir ka sameysanaya inta uu sariirta ka soo kacayo. Dhacdadan qarsoodiga ah waxay bilaabatay markii uu lix jirsaday.
Barashada Federico Bernardeschi Nolosha Shaqsiyadeed ee ka baxsan garoonka. Astaanta Sawirka: Instagram
U-ekaanta Eygiisa: Ciyaartoyda caanka ah ee kubada cagta, kuwaas oo ah C Ronaldo, Neymar, Sanchez iwm waa kuwo dhab ah eeyaha jecel. Xitaa adigu waxaa jira odhaah ah inaysan jirin wax daacad ah oo ka hartay ciyaarta casriga ah, dhab ahaantii ma tixgelinayso xiriirka ka dhexeeya Federico iyo eeyga weyn.
Federico Bernardeschi waa mid ka mid ah eyga ugu jecel kubada eyga. Ku mahadsanid Instagram
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Qoyska
Sheekada qoyska Bernardeshi waxay horey u sharraxday, waxay baraysaa taageerayaasha kubada cagta inay la halgamayaan, iyagoo weli doonaya inay gaaraan weyn oo ay rumeystaan.Sida ugu wanaagsan ee aan dareemin rajo la'aan ayaa ah in laga kaco aaga raaxada oo la sameeyo wax ka duwan'. Halkii uu aabihiis ku daba geli lahaa Hawlgallada kharijinta qorraxda, Federico wuxuu maanta qoyskiisa oo dhan ku faaniyey wuxuu ku reebay qoyskiisii ​​kaligii hore ee madax-bannaanida dhaqaalaha, Thanks to kubada cagta. Haddaba, aan ku siino faham dheeraad ah xubnaha qoyskiisa.
Ku saabsan Federico Bernardeschi Aabaha: Sida waalidiinta badankood 'CarraraMagaalada Marble, Federico aabaha Alberto wuxuu sanadihii lasoo dhaafay ka shaqeyn jiray shirkad qashin qubka Carrara Marble. Wuxuu ahaa aabaha aabihii shaqeeyay saacado dheer, oo kacay 5 am, oo ka tagay shaqada 6 am oo ku soo noqonaya guriga ugu dambeeya 6 pm Wuxuu qaadan lahaa qaab kale oo gaadiid ah inta uu ka tagayo cawadiisa Opel Vectra xaaskiisa iyo wiilkiisa ( Federico) in loo isticmaalo xirida udhaxeysa guriga, isbitaalka, iskuulka iyo xarunta tababarka kubada cagta.
Alberto waxaa lagu qiimeeyaa inuu wiilkiisa yeesho taariikhdiisii ​​ugu horreysay ee mustaqbalkiisa kaas oo ka billowday daqiiqaddii uu u geeyay dukaankii toy-ga halkaas oo uu kubbaddiisa kubbadda cagta ee ugu horreeyay ku soo qaatay. Sidoo kale, isaga ku riixaya inuu wax fiican ka qabto daqiiqadihii hore ee xirfadda taas oo uu lacag ka helay.
Ku saabsan Federico Bernardeschi hooyadeed: Adiga magaciisa looma yaqaan sida waqtiga qorista. Si kastaba ha noqotee, warbaahinta Talyaanigu waxay leedahay in hooyadeed Federico ay kalkaaliye caafimaad ka ahayd isbitaal aan ka fogeyn guriga qoyskooda. Way ku adkeyd inay aad u jeclaato, laakiin mararka qaar waxay iska rogtaa kaarka si ay wiilkeeda u tuurto. Federico, iyada iyo aabihiis, waxaa jiray isku-dheelitir wanaagsan (Tribune ciyaartoyga warbixinta).
Ku saabsan Walaalaha Federico Bernardeschi: Waxay umuuqataa inuusan lahayn walaal, laakiin Federico waxay leedahay walaasad magaceedu yahay Gaia Bernardeschi. Gaia waa loo yaqaanay Siinta taageero shucuureed walaasheed xitaa waxaad la micno tahay inaad shakhsiyaddeeda u sahasho.
La kulan Federico Bernardeschi Walaashe- Gaia Berna. Astaanta Sawirka: Facebook
Waxay soo jiidatay dareenka taageerayaasha markii ay sameysay qoraal muran dhaliyay oo ku saabsan walaalkeed ka dib markii uu ka dhaliyay kooxdiisii ​​hore Fiorentina. Walaasheed Federico Bernardeschi mar bay tiri;
Walaal gacaliye, adiga waxay awoodeen inay booska Fiorentina taageerayaasha u rogaan muusig. Waxaad ku ciyaartey kubadaha cagahaaga ka dibna aad aamusisay garoonka,… Waxaad tahay walaal weyn !!!. Gacaliyeyaal sharafta leh Fiorentina, waan kaa xumahay adiga, laakiin sida had iyo jeer, walaalkay wuxuu muujiyey nooca nin iyo ciyaartoy uu yahay. Hadda qof walbaa wuu aamusanyahay tanna waan ku raaxeysanahay waxbadan ”.
Erayadaas walaasheed Federico Bernardeschi walaasheeda Giana waxay ahayd 9 Febraayo 2018, ka dib markii walaalkeed uu aflagaado xun kala kulmay taageerayaasha gurigiisa inta uu socday ciyaarta oo uu ku dhaliyay laad xor ah qeybtii labaad si uu u aamusiyo dadkii badnaa.
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - nololeedka
Nolosha ee meelaha ugu sarreeya kubada cagta waxaa si fudud looga arki karaa dayuuradahooda khaaska ah, guryaha waaweyn, iyo raaxada fudud. Federico, waxaad daawo u tahay nolosha aad u weyn doorbidida ah inaad wado gawaarida fudud, oo ah muuqaal muujinaya inaad ku nooshahay celcelis nololeed.
Bernardeschi waa daawo ka hortagga muujinta qaab nololeedka qalaad. Sawirka Sawirka: Dhismaha-raaxada, autobytel iyo Fiorentina IT
Xitaa noloshiisa celcelis ahaan, aqal casriga casriga ah ee Federico waxaa lagu qurxiyaa farshaxanno saddex daanyeer ah, laambad daanyeero ah iyo ciyaar hilbo kubbadeed, hadiyad ka timid aabihiis oo ka yimid magaaladiisa Carrara.
Federico, maahan wax sahlan oo ah joogitaanka guriga, laakiin waxay ku qaadataa fasaxyada meelaha xeebta quruxda badan.
Federico Bernardeschi wuxuu ku kharash gareeyaa qaar ka mid ah lacagaha uu ku bixiyo Seaside Vacations. Astaanta Sawirka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Marka lagu eedeeyay inuu qaatay cunug madow: Federico Bernardeschi wuxuu aaminsan yahay in Kubada Cagta ay muhiim tahay, laakiin isaga, waxa ugu muhiimsan adduunka ay tahay 'Sadaqo'. Sababtaas awgeed Federico iyo saaxiibtiis- Veronica Ciardi waa danjirayaal aad u wanaagsan Save the Children urur aan dawli ahayn. Tani waxay soo aragtay horumar laga gaadhay nolosha gabadha quruxda badan oo umuuqata inay daryeelato.
Federico Bernardeschi iyo Gabadha Saaxiibtinimadu waa tusaalooyin saafi ah oo caan ah oo caan ah oo jecel jacaylka carruurta madow. Dhibcaha: Instagram
Tatt Tatto Federico Bernardeschi wuxuu keenaa xasuustii saaxiib dhintay: Ka sokow tattoo-kiisa Ave Maria, Federico wuxuu leeyahay sawirka tattoo-ga ee lambarka funaanad saaxibkiis dhintay. Dhowr usbuuc markii uu dhaaftay Davide Astori, wuxuu nambarkiisa ku sawiray timo ka agdhaw salaada caanka ah ee Katooliga.
Federico Bernardeschi wuxuu ku sharfayaa Davide Astori isagoo wata Tattoo lambarkiisa. Astaanta Sawirka: aVision iyo ThePlayersTribune
Diinta Federico Bernardeschi: Waalidkiis waxay ku koreen Katoolig wuxuuna aad u jecel yahay ku dhaqanka diinta masiixiga. Caddaynta dareenka adag ee uu u leeyahay kaatooliknimada waxaa laga helaa khadhka timaha Ave Maria gacmihiisa iyo sawirkiisa oo ku yaal baadari hoose.
Diimaha Federico Bernardeschi ayaa Sharaxay. Astaanta Sawirka: Instagram
Mar bartilmaameed u ah United: Federico, inta uu weli ahaa da’da yaraa wuxuu ka mid ahaa kuwa hibooyinkiisu aad u soo jiitay Sir Alex Ferguson. Tababarihii hore ee Manchester United ayaa mar looga tagay si la yaab leh oo uu jeclaan lahaa inuu dib ugu la soo wareego 2011. Ma ogeyd?… tallaabada lama fulin karin maxaa yeelay aabihiis Federico wuxuu ku qanciyay inuu kusii dhowaado waddankiisii.
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Soo koobista muuqaalka
Halkan hoose ka daawo Muuqaalka Kooban ee YouTube-ka ee soo koobaya muuqaalkan. Si naxariis leh Booqo & Subscribe inaga Youtube Channel. Sidookale, dhagsii rukumada Bell Icon ee Ogeysiiska.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhrinta sheekadeena Carruurnimada ee Federico Bernardeschi oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Massimiliano Allegri Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh